Ndepụta ngwa ngwa na ngwa maka Ubuntu / Linux | Site na Linux
Ndepụta ngwa ngwa na ngwa maka Ubuntu / Linux
Luigys toro | | Aplicaciones, GNU / Linux, Na-atụ aro
Ndepụta ngwa ngwa na ngwa maka Ubuntu / Linux bụ ndepụta nke ngwa, ngwanrọ, ngwa ọrụ na ihe ndị ọzọ maka Linux nke a nwalere na Ubuntu, ikekwe ọtụtụ n'ime ha nwere ike ịrụ ọrụ na nkesa kachasị amasị gị.
Ọtụtụ n'ime ngwa ndị a ekwuola ebe a Site na Linux, Ndị ọzọ ka zutere ha na ndị ọzọ enweghị ike ide ederede gbasara ngwa ndị a, mana site taa, anyị nyefere onwe anyị ide banyere ha. A ga-emelite ndepụta a oge niile, na-agbakwunye ngwa ndị ị kwadoro anyị na ụfọdụ ndị ọzọ anyị nwere ike ịnwale ma kwado.
1 Ngwa maka Ubuntu / Linux
1.1 Ngwa ọdịyo maka Ubuntu / Linux
1.2 Ndị ahịa na-akparịta ụka maka Ubuntu / Linux
1.3 Ndabere data na ngwa mgbake maka Ubuntu / Linux
1.4 Ngwa na Ngwaọrụ maka nhazi Ubuntu / Linux desktọọpụ
1.5 Ebe Desktọpụ maka Ubuntu / Linux
1.6 Ngwa na Ngwa mmepe maka Ubuntu / Linux
1.7 E-Book Utilities maka Ubuntu / Linux
1.8 Ndị ndezi maka Ubuntu / Linux
1.9 Ngwa agụmakwụkwọ na Ngwaọrụ maka Ubuntu / Linux
1.10 Ngwa Email / Email na Ngwaọrụ maka Ubuntu / Linux
1.11 Ndị njikwa faịlụ maka Ubuntu / Linux
1.12 Egwuregwu maka Ubuntu / Linux
1.13 Ihe eserese eserese na Ngwaọrụ maka Ubuntu / Linux
1.14 Ngwa Intanet na Ngwaọrụ maka Ubuntu / Linux
1.15 Ngwa Ọrụ na Ngwaọrụ maka Ubuntu / Linux
1.16 Ngwa na Ngwa Nche maka Ubuntu / Linux
1.17 Ngwa na Ngwaọrụ ịkekọrịta faịlụ na Ubuntu / Linux
1.18 Njedebe maka Ubuntu / Linux
1.19 Akụrụngwa maka Ubuntu / Linux
1.20 Ngwaọrụ vidiyo na Ngwa maka Ubuntu / Linux
1.21 Ndị nlekọta windo maka Ubuntu / Linux
1.22 Ngwa ndị ọzọ na Ngwaọrụ maka Ubuntu / Linux
Ngwa maka Ubuntu / Linux
Ngwa ọdịyo maka Ubuntu / Linux
Oge: Ọ bụ ngwanrọ na-emeghe agbasa ozi maka mmemme na ijikwa ọdụ ndị dịpụrụ adịpụ.
Ardor: Ọ na-ekwe ndekọ, edezi na ịgwakọta na Linux. I nwere ike ịgụtakwu banyere Ardor na:
Top 5 Free Ngwa maka Production Music
Ardor 3, DAW kacha mma maka ụbọchị, dị maka nbudata
Ardor 3: Okwu Mmalite
Ardor 3 - ndebiri usoro mpịakọta 16
Ezigbo egwu: Ọ bụ ihe na-emeghe iyi audio ọkpụkpọ, ọ na-enye gị ohere igwu egwu gị na-enweghị na-ewe ọtụtụ ego na kọmputa gị.
I nwere ike ịgụtakwu banyere Ezigbo egwu na:
Audacious: Egwú na Style
2.3 Audacious dị
Odidi: Ọ bụ a free, multiplatform na-emeghe iyi software na-enye gị ohere ka ịdekọ ma dezie audios.
I nwere ike ịgụtakwu banyere Ọdịdị na:
Audacity na TBRGs
Onye na-edekọ ọdịyo: Ọ bụ ihe ndekọ ederede dị mfe dị na Ubuntu PPA.
Clementine: Egwu dị iche iche audio formats na-enweghị ọnwụ nke àgwà. I nwere ike ịgụtakwu banyere Clementine na:
Clementine 1.0 bịarutere!
Clementine: Nhọrọ siri ike na Amarok
Wụnye Clementine 1.2, na mmelite ọhụụ na mgbanwe!
Cantata na Amarok na nke Clementine, Heavyweight Battle
Idozi ọdịdị Clementine na Ubuntu 14.04
Ngwa egwu Destokp Google Play: Cross-ikpo okwu unofficial Desktop ahịa na-egwu music si Egwu Google Play.
Mmiri: Ọ bụ igwe di elu maka igwe GNU / Linux.
KXStudio: Ọ bụ a collection nke ngwa na plugins maka ọkachamara audio mmepụta.
K3b: Ọ bụ ihe eserese eserese zuru oke iji gbaa CD / DVD ọkụ ma ewegoro ya maka KDE.
Nwa 3Qt: -Enye gị ohere jikwaa na ịkpado egwu gị, dịka ọmụmaatụ, onye na-ese ihe, ọba egwu, afọ na ụdị nke faịlụ MP3 niile na ọba.
Ka anyị mee egwu: Na-enye gị ohere ịme egwu na kọmputa gị site na ịmepụta abụ olu ụtọ na ụda olu, ị nwere ike ịmepụta ma jikọta ụda, yana ịhazi ihe atụ na ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ.
Mixxx: Ngwá ọrụ DJ mepere emepe, na-enye ihe niile ịchọrọ maka ịgwakọta ndụ, ihe magburu onwe ya traktọ.
I nwere ike ịgụtakwu banyere Mixxx na:
Mixxx 2.0: Gwakọta egwu na ụdị DJ kachasị mma
Adaeze Nwagbara: Ọ bụ ngwá ọrụ na-enye gị ohere wepụ ọdịyo egwu, n'otu ụzọ ahụ, o nwere cloner na CD player.
Ahịa: Ezigbo ọkpụkpọ na-enye gị ohere igwu egwu, egwu ebudatara, egwu na igwe ojii ( SoundCloud, Spotify, Beats, YouTube n'etiti ndị ọzọ), ndetuta ọkpụkpọ, ọdụ redio na ndị ọzọ. O nwekwara njikọta na netwọkụ mmekọrịta, na mgbakwunye na ikwe ka anyị jikọọ na ndị ọzọ site na Gtalk na Jabber.
Ndị ahịa na-akparịta ụka maka Ubuntu / Linux
Ogbogu Okonji: Mepee isi nkata ahịa maka Skype.
HexChat: Ọ bụ onye ahịa IRC dabere na X-Chat, mana n'adịghị ka X-Chat ọ bụ n'efu maka Windows na sistemụ Unix.
Ozi maka Desktọpụ: Ọ bụ ngwa maka Facebook ozi.
Akwukwo: The eluigwe na ala chat ahịa. I nwere ike ịgụtakwu banyere Akwukwo na:
Facebook chat na Pidgin & ọmịiko na-enweghị mgbakwunye pụrụ iche
Nnukwu akara ngosi maka Pidgin tree
Mgbatị iji jikọta Pidgin na Gnome-Shell
Nice akara ngosi maka Pidgin nke Adium kpaliri
Ahụmahụ m na Prosody na Pidgin
Etu esi ejikọ ozi Pidgin na ọkwa KDE
Etu esi eji Bonjour na Pidgin na Arch Linux?
Otu esi ejikọ Facebook na Pidgin
Etu esi eji WhatsApp na Linux na Pidgin
Etu esi ejikọ Hangouts na Pidgin mgbe ụlọ ọrụ gị agaghị ekwe gị?
Wụnye HipChat ma ọ bụ jiri nkata HipChat si Pidgin
Jiri usoro nkata "Line" na Pidgin maka Linux Mint 17 Qiana
HowTo: Jikọọ na nkata Facebook na Pidgin (ọzọ)
ScudCloud: A slack ahịa nke Linux.
Slack-Gitsin: A ahịa iji Slack si console. I nwere ike ịgụtakwu banyere Slack-Gitsin na:
Otu esi eji Slack site na njikwa na Slack-Gitsin
Skype: Official Skype Client for Linux, na ngwá ọrụ na-enye gị ohere iji kwurịta okwu maka free.
telegram: A ngwa ngwa lekwasịrị anya ọsọ na nche, ọ dị oke ọsọ ọsọ, dị mfe ma dịkwa n'efu.
I nwere ike ịgụtakwu banyere telegram na:
Telegram na Ello dị ka ndị ọzọ dị mma na netwọkụ mmekọrịta
Iji Telegram si ọnụ
Ndụmọdụ iji wụnye Popcorn Time, Spotify na Telegram na DEBIAN
Viber: Viber n'ihi na Linux-enye gị ohere iji zipu free ozi na-eme ka free oku ka ndị ọzọ na Viber ọrụ si mba ọ bụla.
Kedu: Achọpụtaghị onye nkata na WhatsApp
Franz: Onye nkata na-enye anyị ohere itinye WhatsApp, Slack, WeChat, HipChat, Facebook Messenger, Telegram, Google Hangouts, GroupMe, Skype dịka ọmụmaatụ, n'etiti ndị ọzọ.
Ndabere data na ngwa mgbake maka Ubuntu / Linux
Ndabere Borg: Ngwá ọrụ dị mma maka nkwado ndabere.
Photorec: Ọ bụ a data mgbake software iji naghachi furu efu faịlụ, gụnyere video, oyiyi, akwụkwọ na faịlụ site na draịva ike, CD-ROMs, na dijitalụ ese foto. I nwere ike ịgụtakwu banyere Photorec na:
Naghachi faịlụ ehichapụ mfe na Photorec site na njikwa
Qt4-onye nchịkwa: Ọ bụ ihe ngosi eserese maka mmemme onye agha Ọ na-enye ohere ịchekwa / weghachi nkebi, nchekwa na MBR / GPT. Ihe omume a bu maka Debian, Suse na Fedora.
CD nnapụta sistemụ: Ọ bụ GNU / Linux nnapụta disk, dị ka eji dị ka bootable CD-ROM ma ọ bụ USB, iji nye ma ọ bụ mezie usoro, ọ na-enye ohere mgbake data. I nwere ike ịgụtakwu banyere CD nnapụta sistemụ na:
SystemRescueCd 1.5.2 wee pụta, distro rụkwaa gị usoro
Sistemụ nnapụta CD v2.4.0 wepụtara
Diski nnwale: Ọ bụ ike free data mgbake software. Ezubere ya iji nyere aka weghachite akụkụ ndị furu efu na / ma ọ bụ tọghata diski ndị na-enweghị ike ibute bootable diski mgbe mgbaàmà ndị a na-akpata site na ngwanrọ na-ezighi ezi.
Ngwa na Ngwaọrụ maka nhazi Ubuntu / Linux desktọọpụ
Okwu Arc: Okwu mbuputa nke nwere uzo
Compiz Config ntọala njikwa: Ihe omuma ihe omuma 3D a na - eweta ihe nlere anya nke na - eme ka udo nke ojiji nke sistemụ ma mekwa ka arụ ọrụ.
Conky: Ọ bụ fechaa usoro ileba anya, nke na-egosipụta ụdị ozi ọ bụla na gị na desktọọpụ.
Ezigbo: Nke a bụ isiokwu dịpụrụ adịpụ maka Ubuntu na nkesa GNU / Linux ndị ọzọ na Gnome.
Ebumnuche Arc: Okwum kacha amasị m maka Ubuntu.
Isiokwu Irradiance: A isiokwu sitere n'aka OSX Yosemite dabere na Radiance.
Gnome Mgbatị: Mgbatị maka desktọọpụ Gnome.
Numix Icon Okwu: Otu n’ime akara ngosi kacha mma maka Linux ubuntu.
Numix Okwu: A ọma isiokwu na-ewu ewu.
Papaịrọs Icon Okwu: Otu n’ime akara ngosi kacha mma maka Linux ubuntu.
Tdị n'otu Tweak Ngwá Ọrụ: A ga-enwerịrị ngwa maka nhazi ubuntu.
Yosembiance isiokwu: Otu isiokwu nke sitere na OSX Yosemite nke sitere na Ambiance.
Ebe Desktọpụ maka Ubuntu / Linux
Cinammon: Ebe desktọọpụ Cinammon.
I nwere ike ịgụtakwu banyere Cinammon na:
Cinammon 1.2 dị, yana ụlọ ọrụ na ndị ọzọ
Gnome: Ebe desktọọpụ Gnome. I nwere ike ịgụtakwu banyere Gnome na:
Isi koodu. Etu esi etinye mkpụrụ edemede na Gnomes
Kwado ọrụ mmetụ otu aka na Gnome touchpad
Headerbar: isiokwu iji jikọta Firefox na Gnome
KDE: Ebe desktọọpụ KDE. I nwere ike ịgụtakwu banyere KDE na:
Belata ngwa KDE ọ bụla na sistemụ sistemụ
Prelink (ma ọ bụ otu esi eme kDE boot na 3 sekọnd)
nwunye: Ebe desktọọpụ MGBE ọ bụ ịga n'ihu nke GNOME 2. Ọ na-enye ọnọdụ desktọọpụ kensinammuo na mma. I nwere ike ịgụtakwu banyere MGBE na:
Ubuntu MATE aburula onye isi “uto” nke Ubuntu
[HowTo] Debian Testing + Mmemme + Mmemme
Ịdị n'Otu: Ebe desktọọpụ Ịdị n'Otu. I nwere ike ịgụtakwu banyere Ịdị n'Otu na:
Mir na Unitydị n'Otu 8 ga-anọ na Ubuntu 14.10
Otu esi amalitegharia Unitydị n'otu na mberede
Xfce: Ọnọdụ desktọọpụ Xfce. I nwere ike ịgụtakwu banyere Xfce na:
XFCE Pụrụ Iche: Akwụkwọ ndị na-adọrọ mmasị
Ngwa na Ngwa mmepe maka Ubuntu / Linux
Android Studio: Ọ bụ ukara IDE maka android, na-enye ngwa kachasị ọsọ maka ịmepụta ngwa maka ngwaọrụ gam akporo dị iche iche. I nwere ike ịgụtakwu banyere Android Studio na:
Aptana: Aptana Studio na-eji ohere nke mgbanwe Eclipse eme ihe ma na-elekwasị anya na igwe mmepe weebụ dị ike.
Atọm: Ihe ederede ederede magburu onwe.
I nwere ike ịgụtakwu banyere Atọm na:
IDE Arduino: Ọ bụ ihe mepere emepe IDE nke na - enyere aka dee koodu maka Arduino.
BlueJ: Ọ bụ ebe mmepe n'efu maka Java emere maka ndị mbido, nke nde mmadụ gburugburu ụwa ji.
Koodu :: Mgbochi: Ọ bụ ebe mmepe n'efu maka C, C ++ na Fortran, wuru iji gboo mkpa kachasị mkpa nke ndị ọrụ ya. Ezubere ya ka o buru ihe kwesiri ntukwasi obi ma nwekwaa ya.
Usoro: O bu uzo mepere emepe ma nweta ebe ana-kpo IDE maka C, C ++, PHP na Node.js.
eklips: Ọ bụ ama ama maka Java, C / C ++ na PHP nwere ọtụtụ arụmọrụ
Na-egbu mmụọ: Ọ bụ akụrụngwa maka imepụta elektrọnik n'efu, atụmatụ a na-eme ka onye ọ bụla nweta eletrọniki.
I nwere ike ịgụtakwu banyere Na-egbu mmụọ na:
Geany: Ọ bụ ederede ederede edepụtara na GTK, yana njirimara ndị bụ isi nke gburugburu mmepe agbakwunyere. Emepụtara ya iji nye obere IDE na ngwa ngwa, nke nwere nanị ole na ole ịdabere na nchịkọta ndị ọzọ.
I nwere ike ịgụtakwu banyere Geany na:
Mgbagha: Ọ bụ a zuru ezu zuru ezu gam akporo emulator. I nwere ike ịgụtakwu banyere Mgbagha na:
Git: Ọ bụ usoro ihe eji akwụ ụgwọ ma na-emeghe, nke emebere iji mee ngwa ngwa na njikwa nke ọma ụdị njikwa ụdị nke obere na nnukwu ọrụ. I nwere ike ịgụtakwu banyere Git na:
Jikwaa nsụgharị na mmemme gị na Git na Gitorious
Na-amalite oru ngo na Git na Google Code
Ndenye nduzi iji Git
Echiche: Karịrị iwu 100 maka Git nke ị kwesịrị ịma
IntelliJ ID: IDE siri ike maka JAVA
KDvelopu: Ọ bụ ebe a na - akwụghị ụgwọ ma mepere emepe IDE, yana ọtụtụ arụmọrụ ma nwee ike iji plọg maka C / C ++ na asụsụ mmemme ndị ọzọ
Komodo Dezie: Ọ bụ n'efu ma mepee IDE nke na-akwado ọtụtụ asụsụ. I nwere ike ịgụtakwu banyere Komodo Dezie na:
Okpokoro ọkụ: Ọ bụ a ikpeazụ ọgbọ koodu nchịkọta akụkọ, nke na-enye ohere ndụ nzuzo.
MariaDB: Otu n'ime sava nchekwa data kachasị ewu ewu. Mere na mbụ MySQL mmepe.
I nwere ike ịgụtakwu banyere MariaDB na:
MySQL na Maria DB: Usoro Mbugharị Ndenye maka Debian
MonoDevelop: Cross-platform IDE maka C #, C # na ndị ọzọ -.
Nnemiver: Ọ bụ nbugharị C / C ++ nke na-abanye n'ime gburugburu desktọọpụ GNOME.
Oh-m-zsh: Usoro maka ijikwa zsh nhazi.
I nwere ike ịgụtakwu banyere Oh-m-zsh na:
Wụnye zsh ma hazie ya Oh My Zsh
PyCharm: IDE siri ike maka Eke Ọgba
PostgreSQL: Ọ bụ usoro data dị ike na nke mepere emepe.
Postman: Mepụta enyemaka maka API ngwa ngwa
Qt Onye Okike: A cross-platform integrated development development (IDE), ezubere iji kwado okike nke ngwaọrụ ejikọrọ, njirimara onye ọrụ na ngwa.
Oke oyibo VCS: Ọ bụ usoro nke eserese eserese eserese iji nye usoro dị mfe na njikwa nke mfe.
Ederede Dị Nsọ: Otu n'ime ndị editọ ederede kachasị mma m gbalịrị ma na-eji ugbu a. I nwere ike ịgụtakwu banyere Ederede Dị Nsọ na:
Ederede Dị ebube 2: nchịkọta akụkọ kacha mma dị?
Brackets vs SublimeText3: Kedu onye ị ga-ahọrọ?
Etu esi etinye ederede 3 dị elu na openSUSE
Swift: Ọ bụ nzube zuru ezu mmemme asụsụ asụsụ wuru iji a oge a na obibia nche ụkpụrụ, arụmọrụ na software imewe.
Ubuntu-SDK: Ubuntu SDK ukara. I nwere ike ịgụtakwu banyere Ubuntu-SDK na:
Ule Usoro Visual Studio
Zsh: A dị ike iwu akara shei.
E-Book Utilities maka Ubuntu / Linux
caliber: Sọftụwia nwere interface jọrọ njọ, mana ọ dị ike maka njikwa na ntugharị e-akwụkwọ.
I nwere ike ịgụtakwu banyere caliber na:
Caliber: ihe kacha mma Open Source maka mmemme E-akwụkwọ
Otu esi agbanwe ebook na Caliber
Evince: Ọ bụ ihe nkiri na-ekiri ọtụtụ formats. Ebumnobi nke Evince bụ iji dochie ọtụtụ ndị na-ekiri akwụkwọ na-adị na desktọọpụ GNOME site na iji ngwa dị mfe.
Foxit: Foxit Reader 8.0, Onyinye mmeri PDF Reader.
Ọfụma: Otu n'ime ihe ndị kasị ewu ewu na ngwa maka eReader. I nwere ike ịgụtakwu banyere Ọfụma na:
FBReader: Mpempe akwụkwọ fechaa maka faịlụ ebook na Linux
Lucidor: Ọ bụ mmemme maka ịgụ na ijikwa akwụkwọ elektrọnik. Lucidor na-akwado e-akwụkwọ n'ụdị faịlụ EPUB na katalọgụ na usoro OPDS. I nwere ike ịgụtakwu banyere Lucidor na:
Lucidor, mmemme iji gụọ akwụkwọ ntanetị
MasterPDF nchịkọta akụkọ: Ọ bụ adaba adaba ma mara PDF editọ maka Linux.
MuPDF: Mpempe akwụkwọ PDF dị fechaa nke nwere ihe ngosi XPS.
I nwere ike ịgụtakwu banyere MuPDF na:
PDF agụ naanị na-erepịakwa 3MB
Ụdị: Ọ bụ ihe nlere akwụkwọ nke ụwa niile nke KDE mepụtara. Ụdị ọ bụ obe-ikpo okwu.
Sigil: Ọ bụ multiplatform EPUB e-akwụkwọ editọ.
Ndị ndezi maka Ubuntu / Linux
Bluefish: Ọ bụ nchịkọta akụkọ dị ike maka ndị mmemme na ndị mmepe weebụ, nwere ọtụtụ nhọrọ maka ide ederede ibe weebụ, edemede na koodu mmemme. I nwere ike ịgụtakwu banyere Bluefish na:
Maka nbudata Bluefish 2.2.2
Bluefish 2.2.0-2 na-abịa Debian Testing
brackets: A ederede ederede ugbu a maka imewe weebụ.
I nwere ike ịgụtakwu banyere brackets na:
Brackets, IDE maka mmepe weebụ nke kwere nkwa
Wụnye brackets na ArchLinux n'aka gị
Emacs: A Text Editor, Free na Open Source, extensible, customizable na ọtụtụ ndị ọzọ.
I nwere ike ịgụtakwu banyere Emacs na:
Vim na Emacs: N'ihu niile dị jụụ
Gedit: Ọ bụ ederede ederede nke GNOME. Ọ bụ ezie na ebumnuche ya dị mfe ma dịkwa nfe iji, Gedit bụ ike nchịkọta ozi ederede zuru oke. I nwere ike ịgụtakwu banyere Gedit na:
Kate: Ọ bụ ederede ederede nchịkọta akụkọ nke ọrụ ahụ KDE SC, ma e jiri ya tụnyere ụfọdụ ngwa ndị yiri ya na gburugburu Desktọpụ ndị ọzọ, ọ dịka IDE, juputara na nhọrọ na arụmọrụ. Ma lezienụ anya, ọ bụ naanị nchịkọta ederede.
I nwere ike ịgụtakwu banyere Kate na:
Atụmatụ Kate: nginggbanwe agba KATE
Ederede Dị Nsọ: Otu n'ime ndị editọ ederede kachasị mma m gbalịrị ma na-eji ugbu a.
Vim: Ọ bụ ihe ndezi ederede dị elu, nke na-achọ inye ike nke nchịkọta akụkọ 'Vi', nke nwere atụmatụ zuru ezu.
I nwere ike ịgụtakwu banyere Vim na:
Etu esi ede ihe na VIM
Ntọala Vim kachasị elu
Njedebe Friday: Iche echiche Vim [[fọdụ aro]
Ngwa agụmakwụkwọ na Ngwaọrụ maka Ubuntu / Linux
Oge Baịbụl: O bu akwukwo mmuta nke emere na ulo akwukwo Mma agha y Qt.
Celestia: Ọ bụ oghere dị na mbara igwe nke na-enye gị ohere ịchọpụta mbara igwe anyị n'akụkụ atọ.
Chemtool: Ọ bụ obere mmemme iji see usoro kemịkalụ na Linux.
Epoptes: Ọ bụ a free na-emeghe iyi ngwá ọrụ maka management nke a na kọmputa laabu na ya nlekota functionalities.
Gbamgbam: Ọ bụ a elu-edu izi software ngwugwu mejupụtara ọtụtụ eme maka ụmụaka si 2 ruo 10 afọ.
GNUKhata: Isi mmalite emeghe software nke ego.
Mma: Isi mmalite emeghe ERP, mepụtara na Java na teknụzụ OSGI. Mma nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke modulu.
I nwere ike ịgụtakwu banyere Mma na:
Idempiere, Open Source Erp na teknụzụ OSGI
Google Earth: Ọ bụ usoro mebere ụwa, maapụ na mmemme ozi obodo.
Ọnọdụ GP: Ọ bụ ngwa nke tebụl oge maka Linux.
Italc: Ọ bụ ngwa ọrụ dị ike na nke nkenke maka ndị nkuzi. Ọ na - enye gị ohere ịlele ma chịkwaa kọmputa ndị ọzọ na ntanetị na ụzọ dị iche iche.
I nwere ike ịgụtakwu banyere Italc na:
iTALC: otu esi eji sọftụwia na-akwụghị ụgwọ na klasị akwụkwọ gị
KDE Edu Suite: Sọftụwia Agụmakwụkwọ Na-akwụghị Aka dabere na teknụzụ KDE.
Maple: Ọ bụ sọftụwia mgbakọ na mwepụ nke jikọtara igwe kachasị ike na mgbakọ na mwepụ na ụwa, yana interface nke na-eme ka ọ dị mfe nyocha, nyocha, iji anya nke uche na idozi nsogbu mgbakọ na mwepụ.
MATLAB: Ikpo okwu MATLAB ọ kachasị maka idozi nsogbu injinia na nsogbu sayensị. MATLAB nwere ike na-agba ọsọ analysis nke nnukwu data tent.
maxima: Ọ bụ usoro maka ịkọwa okwu ihe atụ na ọnụọgụ, gụnyere iche, njikọta, usoro Taylor, mgbanwe Laplace, usoro ọdịiche nkịtị, sistemụ nke usoro akara, wdg.
Moodle: Ọ bụ usoro njikwa usoro maka mmụta n'ịntanetị.
Mepee: Ọ bụ 2D geometry software.
Mepee: Ọ bụ ngwanrọ maka njikwa ụlọ akwụkwọ.
Icha: Ọ bụ sọftụwia na - enye gị ohere ịme mmemme nke akụkọ mmekọrịta gị, egwuregwu na ihe eserese, ị nwekwara ike ịkekọrịta ihe okike gị na ndị ọzọ nọ na ntanetị. Icha bụ oké ngwá ọrụ ịkụziri ụmụaka koodu.
Stellarium: Ọ bụ sọftụwia na - enye ndị mmadụ ohere ịmegharị ihe dị na mbara ala na kọmputa ha.
I nwere ike ịgụtakwu banyere Stellarium na:
Stellarium 0.14.2 maka ndị hụrụ mbara igwe
Nkechi: Tux4Kids na - ewepụta sọftụwia dị elu maka ụmụaka, na ebumnuche nke ijikọta ọchị na mmụta na ngwugwu anaghị egbochi.
Ngwa Email / Email na Ngwaọrụ maka Ubuntu / Linux
Evolution: Ọ bụ a onwe onye ozi management ngwa na-enye email, kalenda na adreesị arụmọrụ.
Geary: Ọ bụ ngwa email nke etinyere n’ime GNOME 3. Ọ ga - enyere gị aka ịgụ ma zipụ email site na iji interface dị mfe na nke ọhụụ. I nwere ike ịgụtakwu banyere Geary na:
Geary: Onye ozi ọhụụ [+ Ntinye na Debian]
Ozi: Ọ bụ daemon na-achọpụta POP3 na IMAP sava maka ozi ịntanetị ọhụrụ.
Thunderbird: Ọ bụ a free email ngwa na dị mfe hazi, hazie, na nwere ọtụtụ atụmatụ. I nwere ike ịgụtakwu banyere Thunderbird na:
Ndabere Thunderbird na Firefox n'etiti Windows na Linux
Ngwanụ KMail, m na-abịa azụ Thunderbird
Ozi: Unofficial desktọọpụ ahịa maka Linux si Gmail na Igbe mbata Google.
Ndị njikwa faịlụ maka Ubuntu / Linux
7zip: Wepu faịlụ zip. I nwere ike ịgụtakwu banyere 7zip na:
Mpinye na 7zip ruo na nke kachasị site na Dolphin na KDE (Nchịkọta Ọrụ)
Nchọgharị AngrySearch: Na-enye gị ohere ịchọ na Linux, na-egosi nsonaazụ ozugbo ka ị pịnyere.
Ugboro abụọ Ọchịagha: Ọ bụ ihe njikwa faili, obe-ikpo okwu ya na ogwe abụọ n'akụkụ n'akụkụ. O sitere n'ike mmụọ nsọ Ọchịchị dum ma nwee ụfọdụ echiche ọhụrụ.
Marlin: Ọ bụ ihe ọhụrụ ihe ntanetị ọkụ. A mụrụ ihe nchọgharị a yana ọrụ Elementary ma kee ya ka ọ dị mfe, ngwa ngwa ma dịkwa mfe iji. I nwere ike ịgụtakwu banyere Marlin na:
Inye Marlin ohere
Wụnye Marlin na ule Debian
Nautilus: Ọ bụ a file manager ezubere imewe ka imewe na omume nke desktọọpụ Gnome, na-enye onye ọrụ ụzọ dị mfe iji jikwaa ma jikwaa faịlụ ha. I nwere ike ịgụtakwu banyere Nautilus na:
Zoro ezo ozi site na Nautilus na Turbo-Secure
Otu esi enyere echiche 2-panel na Nautilus
Nemo: Ọ bụ faili faili maka desktọọpụ gburugburu ebe obibi pawuda.
QDirStat: Ọ bụ a Njikwa faili na a eserese interface na-enye gị ohere ele faịlụ na ogide ọzọ ohere efu dị na diski anyị.
stow: Onye na-enyocha faịlụ na-agbakwunye nke ọma na gburugburu desktọọpụ ọ bụla. stow bụ ederede dabere ma mepụtara na Python .
Synapse: Ihe kacha mma ngwa ngwa launcher na Linux. I nwere ike ịgụtakwu banyere Synapse na:
Synapse: onye na - ewepu ngwa ngwa nke GNOME ma obu ngwa ngwa
Eke: Nke a bụ ndabara njikwa faili maka Xfce 4.6. Emebela ya ka ọ dị ngwa ma dịkwa mfe iji.
I nwere ike ịgụtakwu banyere Eke na:
Wụnye Thunar 1.5.1 na taabụ na Xubuntu 12.10 ma ọ bụ 12.04
Egwuregwu maka Ubuntu / Linux
0 AD: Ọ bụ a free na-emeghe iyi ezigbo oge atụmatụ egwuregwu maka GNU / Linux enịm ke agha ochie na yiri ndị ọzọ egwuregwu dị ka Afọ nke alaeze, Alaeze Ukwu .wa o Afọ nke akụkọ ifo. I nwere ike ịgụtakwu banyere 0 AD na:
0 AD Alpha 2, ihe ka mma
AD: a na-enye ndị na-enweghị ego nke afọ nke alaeze ukwu
Ojuju5: Sid Meier si mmepeanya a ghọtara dị ka onye nke kasị mma atụmatụ franchises niile oge.
Ọkụ: Ọ bụ ihe na-emeghe iyi na multiplatform egwuregwu na-enye gị ohere igwu kaadị na netwọk.
I nwere ike ịgụtakwu banyere Ọkụ na:
Mee anwansi: nzukọ na PC gị, n'efu na Cockatrice
Desura: Ọ bụ ọrụ nkesa dijitalụ nke ndị obodo na-eme maka ndị na-egwu egwuregwu, na-etinye egwuregwu kachasị mma, mods na nbudata ọdịnaya site n'aka ndị mmepe na mkpịsị aka ha, njikere ịzụta na igwu egwu. I nwere ike ịgụtakwu banyere Desura na:
Esi wụnye Desura (Steam maka Linux)
GBrainy: Ọ bụ egwuregwu teaser ụbụrụ, nke na-eme ka ndị egwuregwu nwee ọ funụ ma mee ka ụbụrụ ha zụọ azụ.
Minecraft: Ọ bụ egwuregwu gbasara ịtụkwasị ihe mgbochi na njem dị iche iche. Nyochaa ụwa ndị enweghị usoro wee wuo ihe ndị dị egwu site na ụlọ kachasị mfe ruo nnukwu ụlọ. I nwere ike ịgụtakwu banyere Minecraft na:
Wụnye Minecraft si PPA
PlayOnLinuxKpọọ egwuregwu Windows na Linux.
I nwere ike ịgụtakwu banyere PlayOnLinux na:
PlayOnLinux ma ọ bụ otu esi egwu egwuregwu Windows kachasị amasị gị na Linux
Ndị Simutrans: Ọ bụ a free na-emeghe iyi iga simulator.
I nwere ike ịgụtakwu banyere Ndị Simutrans na:
Simutrans: ụdị ụgbọ njem Tycoon
Steam: Ọ bụ nnukwu egwuregwu na-egwu egwu, nke na-enye ohere igbu ọtụtụ egwuregwu.
Mmanya (Acronym for "Wine Is Not an Emulator") bụ a ndakọrịta oyi akwa nwere ike iji na-agba ọsọ Windows ngwa dị iche iche sistemụ.
Xonotic: Ọ bụ mbụ onye ono, ngwa-ngwa-ngwa-ngwa, nke na-ewe anyị oge nke fps arena. Ọ nwere otu ụdị egwuregwu egwuregwu, mana ike ya bụ ọnọdụ ọtụtụ ndị sitere n'ike mmụọ nsọ na-ezighi ezi na Quake.
I nwere ike ịgụtakwu banyere Xonotic na:
Ihe eserese eserese na Ngwaọrụ maka Ubuntu / Linux
AfterShot: A dị ike ọzọ ka Adobe Photoshop!
Agave: Ọ bụ ngwa dị mfe maka desktọọpụ GNOME nke na-enye gị ohere iwepụta ụdị agba dị iche iche na-amalite site na otu agba.
blender: Ọ bụ a free na-emeghe isi ngwá ọrụ maka ihe e kere eke nke 3D oghere, animations na ihe atụ. I nwere ike ịgụtakwu banyere blender na:
Blender 2.76b: A bia 3D
Ngwakọta kiiboodu na Blender (Vol. I)
Jaketị ala: Ihe nkiri nkiri ndị Argentine na Blender mere
Otu esi emepụta 3D Spaceships na Blender na SpaceshipGenerator
Ihe nkiri: Ọ bụ oghe iyi sọftụwia maka ihe osise miri emi
Ọchịchịrị: Ọ bụ ihe eji eme ihe mepere emepe, yana ihe eserese eserese na RAW onye nrụpụta
Digikam: Ọ bụ ihe dị elu dijitalụ foto management ngwa maka Linux. I nwere ike ịgụtakwu banyere Digikam na:
DigiKam: Mara ọkwa ma hazie ihe oyiyi gị na KDE
Fotoxx: Ọ bụ usoro mmeghe ihe eji emeghe ihe na nchịkọta njikwa nchịkọta.
GIMP: Ọ bụ usoro nkesa n'efu maka ọrụ ndị dị ka ntinye foto, nhazi ihe oyiyi na ihe okike
Hugin: Ọ bụ free multiplatform ọzọ maka ịmepụta eserese panoramic na mkpebi dị elu, na mgbakwunye na ịnwe ngwaọrụ na-enweghị ngwụcha maka idezi onyonyo. I nwere ike ịgụtakwu banyere Hugin na:
Hugin: mepụta foto kacha mma gị.
Inkscape: Ọ bụ onye nchịkọta akụkọ ihe osise veklatform, nke nwere ọtụtụ ọrụ na-eme Inkscape ngwá ọrụ dị ike na ihe a niile n'okpuru ikikere GPL. I nwere ike ịgụtakwu banyere Inkscape na:
[Inkscape] Okwu Mmalite na Inkscape
Inkscape 0.91 bịarutere na-ebu ozi na ndozi
Inkscape + KDE: gbanwee akara ngosi gị nke sistemu gị
Ihe omumu maka imuta otu esi aru oru na Inkscape
nzu: Open iyi software maka dijitalụ nka, na-ese ihe osise na ihe osise can nwere ike ịgụ ihe banyere nzu na:
Krita 2.8 nwere nkwado dị mma maka Mbadamba
Krita bụ finalist na Open Source Awards 2011
Na-enyere aka mee ka mmepe nke Krita mee ngwa ngwa
Luminance HDR: Ọ bụ ihe eji eme ihe eji emeghe ihe yana ihe eji eserese eserese eserese nke na-ezube ịnye ọrụ maka ihe onyonyo HDR.
Ojo: A ngwa ngwa na mara mma ihe nkiri na-ekiri.
OpenShot: Ọ bụ a free, mfe na-eji, mma-ọgaranya video nchịkọta akụkọ maka Linux. I nwere ike ịgụtakwu banyere OpenShot na:
Openshot: Mepụta ihe ngosi mmịfe nke foto anyị
Enweelarịhothot n'ime ebe nchekwa Ubuntu
Pinta: Pinta bụ ngwanrọ mepere emepe maka ịse ihe na idezi onyonyo.
I nwere ike ịgụtakwu banyere Pinta na:
Pint 1.2 dị
Pitivi: Ọ bụ a free video nchịkọta akụkọ na a mara mma ma kensinammuo ọrụ interface, a dị ọcha koodu isi na oké obodo.
Mgbasawanye: Ọ bụ usoro mmemme maka nyocha na ịhụ ụzọ nke ọkụ nke imewe.
RawTherapee: A mara mma ma obere mara foto edezi ngwa.
Shotwell: Ọ bụ njikwa foto maka GNOME 3.
Nkwụsị: Ọ bụ ngwa ngwanrọ na - akwụghị ụgwọ maka imepụta eserese nkwụsị. Ọ na - enyere gị aka ijide ma dezie okpokolo agba na mbupụ ha dịka otu faịlụ.
Xara Oke: Ọ bụ ike izugbe nzube ndịna-emeputa mmemme.
Ngwa Intanet na Ngwaọrụ maka Ubuntu / Linux
Anatine: A desktọọpụ ahịa maka Twitter na ọtụtụ customizations.
Nwere Obi Ike: Ọ bụ ihe nchọgharị desktọọpụ dị mma na ngwa ngwa maka MacOS, Windows na Linux.
I nwere ike ịgụtakwu banyere Nwere Obi Ike na:
Otu esi agagharị n'enweghị nsogbu na iji Brave
Chrome: Otu n’ime ihe nchọgharị weebụ kachasị ewu ewu na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke plugins / ngwa.
chromium: Ọ bụ ihe na-emeghe iyi oru ngo na Aims na-ewu ihe ndị kasị mụ, ala, na kasị nchọgharị na weebụ maka niile ọrụ.
Firefox: Otu n’ime ihe nchọgharị weebụ kachasị ewu ewu na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke plugins / ngwa.
Tor: Ọ bụ ihe nchọgharị weebụ na-akwụghị ụgwọ ma na-emeghe na-enyere gị aka ịgbachitere nchịkọta okporo ụzọ weebụ, ụdị nke onyunyo nke na-eyi nnwere onwe na nzuzo egwu.
Vivaldi: Ihe nchọgharị ọhụrụ na nke dị elu na ọtụtụ nhazi.
Yandex: Nchọgharị ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma.
Ngwa Ọrụ na Ngwaọrụ maka Ubuntu / Linux
Ụda nhụju: Ngwa nke na-enye gị ohere ilekwasị anya na nrụpụta ọrụ gị, ekele maka egwu ikuku.
igodo akpaaka: Ọ bụ a na desktọọpụ akpaaka ngwa maka Linux, -enye gị ohere jikwaa n'ihendesịta na nkebi ahịrịokwu, na ekenye abbreviations na hotkeys ka onye ọ bụla n'ime ha
Nkata Nkata: Nke a multipurpose ngwa na-enyere mfe iri nile di iche iche nke ndetu.
nchapụta: Ihie ihie maka ubuntu.
Cgba ọsọ - A nnukwu nkenke mgbako.
California: Ngwa Kalịnda zuru oke nke na-eji asụsụ okike iji mepụta mmemme.
CopyQ: Ọ bụ ihe dị elu clipboard manager na edezi na scripting ọrụ.
F.lux: Na-agbanwezi kọmpụta na-akpaghị aka iji kwado ọkụ.
Gnome-ọkọwa okwu: A dị ike ọkọwa okwu maka Gnome.
Gaa maka ya: Ọ bụ ihe dị mfe ma mara arụpụta ngwa, nke na-enye ndepụta ịme ihe, jikọtara ya na ngụ oge na-eme ka uche gị dịrị na ọrụ dị ugbu a.
Ihe m niile: Njikwa ndepụta ndepụta dị mfe.
Ngosipụta nke ihu igwe m: Ngosipụta ihu igwe maka Ubuntu.
Notes: A mfe ndetu-inweta ngwa na Linux.
Notepadqq: Ọ bụ ihe ọzọ na nchịkọta ederede Notepad ++.
Atụmatụ: Plank akara aka ka mfe ngwa n'ọdụ ụgbọ mmiri na mbara ala.
PomoDoneApp: Ọ bụ ụzọ kachasị mfe iji soro usoro Pomodoro soro rụọ ọrụ gị, n’elu ọrụ njikwa ọrụ gị ugbu a.
Papyrus: Ọ bụ ihe dị iche iche ihe njikwa na-elekwasị anya na nche, mma ọrụ interface. Papaịrọs na-anwa inye dị mfe iji na smart ọrụ interface maka ọrụ.
Adịbeghị anya: A na-adịbeghị anya ngosi ngosi.
Redshift: Ngwá ọrụ nke na-enye gị ohere ịgbanwe ọkụ nke ihuenyo gị dịka ọnọdụ okpomọkụ, oge na ihu igwe nke gburugburu gị. Nke a nwere ike inyere anya gị aka imerụ obere ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ n'ihu ihuenyo n'abalị.
Ntuchi: Ọ bụ a ihuenyo kpọọ omume na ọtụtụ mmezi atụmatụ.
Ihe dị mfe: Ọ bụ ihe na-ngwa na-ndetu si dị iche iche nyiwe. Ọ bụ onye asọmpi na Evernote.
Mmiri: Ngwa dị mfe ma mara mma maka ndetu kwa ụbọchị.
Nkọwa okwu: Nnyapade maka ọkacha mmasị gị na desktọọpụ.
All.txt: Editọ magburu onwe ya iji jikwaa ma dee ọrụ kwa ụbọchị.
TodoistAdịghị n'aka Todoist ahịa, ọrụ management n'elu ikpo okwu, oké ọrụ interface, na nwere ụfọdụ nhọrọ adịchaghị atụmatụ.
Kwupụta m: Na - ekwuputa mgbe enyere iwu ogologo oge.
Xmind: Uche nkewa ngwá ọrụ.
Office WPS: Otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị mma maka ngwa Linux.
Zim: Editọ ederede ederede na-ejigide nchịkọta peeji nke wiki, ezigbo maka akwụkwọ. Echekwara na faịlụ ederede dị larịị maka njikwa njikwa mfe.
Ngwa na Ngwa Nche maka Ubuntu / Linux
ClamAV: Ọ bụ ihe na-emeghe isi antivirus engine maka nchọpụta nke Trojans, nje, malware na egwu egwu ndị ọzọ.
GnuPG: Ọ na - enye gị ohere izoputa ma banye data na ozi gị, ọ nwere sistemụ njikwa igodo dị iche iche, yana modulu ịnweta maka ụdị akwụkwọ ndekọ aha ọha na eze.
Gufw: Otu n’ime mgbidi kachasị mfe na ụwa Linux.
OpenSSH: OpenSSH Secure Shell server na ahịa
Okwunigwe: Ọnọdụ GNOME maka GnuPG
Nkwanye: TCP Capture na Debugging ngwá ọrụ
Ngwa na Ngwaọrụ ịkekọrịta faịlụ na Ubuntu / Linux
CrossFTP: Ọ bụ ngwa ọrụ na - eme ka ọ dị mfe ijikwa ọrụ metụtara FTP.
D-lan: LAN maka nkekọrịta faịlụ.
Iju Mmiri: Ọ bụ a free software, cross-ikpo okwu fechaa BitTorrent ahịa.
Dropbox: Ọ bụ a free ọrụ na-enye gị ohere iji were foto gị, akwụkwọ na vidiyo ebe ọ bụla na ịkọrọ ha mfe.
Meiga: Ọ bụ ngwa ọrụ na - eme ka ị nwee ike ịkekọrịta akwụkwọ ndekọ aha ndị ahọpụtara site na weebụ.
onweCloud: Ebumnuche nke ownCloud bụ inye gị ohere faịlụ gị ebe ọ bụla ị na-
Ajụjụ: Otu sistem na-azu na ndi ozo (P2P) maka ikesa faili n’etiti ndi ahia.
PushBullet: Jikọọ ngwaọrụ gị, na-eme ka ha nwee mmetụta dị ka otu.
NKP: The qBittorrent oru ngo aims na-enye a free software ọzọ ka uTorrent.
Ogwurugwu- Mmekọrịta otu oge maka ụlọ ọrụ na ndị otu nzuzo
Syncthing: Na-anọchi ọrụ patent Cloud ma mekọrịta ọrụ maka ihe mepere emepe, tụkwasịrị obi, na ịkwadoghị.
TeamViewer: PC ntanetị / ngwanrọ nnweta dịpụrụ adịpụ, n'efu maka ojiji nkeonwe.
Mfefe: Dị mfe, dị fechaa, ọtụtụ-ikpo okwu iyi ahịa.
uGet: Ihe kacha mma download njikwa maka Linux.
Njedebe maka Ubuntu / Linux
GnomeTerminal: A ọtụtụ-arụnyere na ọnụ ọnụ emulator na Linux ụwa
Guake: Ọ bụ ọdụ elu-ala maka Gnome
Ogwe njikwa: Ọnụ kachasị mma maka desktọọpụ KDE.
RxVT: Egwu emulator maka X11, nnọchi a ma ama maka ụkpụrụ 'xterm'.
Unicode nke Rxvt: Ọ bụ ndụdụ nke ndị kasị ewu ewu ọnụ ọnụ emulator.
Njedebe: Ọ bụ ndị kasị dị ike ọnụ emulator na Linux, ọ na-juru n'ọnụ na atụmatụ.
Okwu: Mfe ọnụ emulator dabere na VTE n'ọbá akwụkwọ, ịgbatị site na Lua.
Akụrụngwa maka Ubuntu / Linux
Actionaz: Ngwaọrụ akpaaka maka Ubuntu / Linux
Lecha ọcha bit: Mee ngwa ngwa dobe ohere diski ma chebe nzuzo gị. Cache n'efu, kpochapụ kuki, kpochapụ akụkọ ihe mere eme, hichapụ faịlụ nwa oge, hichapụ ihe ndekọ na ndị ọzọ ...
Caffeine: Gbochie ubuntu imechi emechi.
Mmekọrịta: bụ nkebi na disk oyiyi / cloning omume yiri Ezi Image® ma ọ bụ Norton Ghost®.
Easystroke: bụ a ogbugbu ude ngwa maka X11.
Zoo: na-eme ka ndụ gị dị mfe site na ijikwa okwuntughe gị na ozi ndị ọzọ dị mkpa.
Ntughari: Gbanwee nkeji niile.
Maapụ GD: A ngwá ọrụ iji anya nke uche disk ojiji.
Mepụta: Audio Ntụgharị.
Ejiri: Uru nke diski maka Ubuntu / Linux.
GRADio: Akụrụngwa redio maka Linux ubuntu -.
Breeki aka: Ihe ntụgharị vidiyo.
KeePass: Onye njikwa okwuntughe nke Windows, yana nkwado obe nke ikpo okwu site na Mono.
KeePassX: Multiplatform paswọọdụ njikwa.
Image Image: Ọ bụ ngwa ọrụ enyere akara maka mgbanwe na ịrụ ọrụ na onyonyo.
LastPass: Okwuntughe njikwa ikpo okwu.
IkeChọpụta nsogbu oriri ike.
Pịa Audio: Welie Linux Audio na profaịlụ omenala.
Peazip: Uru na decompress abịakọrọ faịlụ
Ihe omuma: Graphical Hardware okpomọkụ Nyochaa maka Linux.
Rịba Ama: Ihe ndezi Markdown kacha mma na Ubuntu / Linux.
Remmina: Ngwaọrụ nchịkwa maka Linux na Unix ndị ọzọ.
Sistemụ: Gosi sistemụ na ọkwa ọkwa.
Synaptik: Ọ bụ mmemme eserese maka njikwa njikwa ngwa ngwa.
TLP: Na-ebuli batrị Linux.
dịgasị iche iche: Ọ bụ onye na-agbanwe akwụkwọ ahụaja na-emepe emepe maka Linux, juputara na njirimara dị ukwuu, mana fechaa ma dịkwa mfe iji.
Igbe VirtualBox: Ọ bụ nzube zuru ezu zuru ezu maka ike maka x86 ngwaike, ezubere iche maka ihe nkesa, desktọọpụ, na itinye ya n'ọrụ.
Xtreme Onye njikwa ihe njikwa: A ọma download manager na a jụụ ọrụ interface maka Linux.
Akwụkwọ ahụaja Na-agbanwe akwụkwọ ahụaja na akpaghị aka.
Ngwaọrụ vidiyo na Ngwa maka Ubuntu / Linux
Egwuregwu Bomi: A dị ike na mfe iji media player.
Kodi: A free na-emeghe isi iyi (GPL) media center software maka ịkpọ videos, music, foto, egwuregwu na ndị ọzọ.
MPlayer: Ọ bụ a nkiri ọkpụkpọ na-agba na ọtụtụ usoro, ọ na-arụ niile ọdịyo na video formats.
MPV: Multiplatform multimedia ọkpụkpọ.
SMPlayer: Media Player nwere koodu etinyere n’ime ya. Ejije niile video na ọdịyo formats.
SVP: Ọ-enye gị ohere ịlele ọ bụla video na gị na desktọọpụ kọmputa site na iji etiti interpolation, dị ka ọ dị na elu-ọgwụgwụ telivishọn na projectors.
VLC: Ọ bụ a free na-emeghe iyi media player na kpuchie na-arụ multimedia faịlụ dị ka nke ọma dị ka DVD, ọdịyo CD, VCDs, na dị iche iche gụgharia ogbugba ndu.
Ndị nlekọta windo maka Ubuntu / Linux
2 bwm: Njikwa windo na-ese n'elu mmiri.
egwu: Njikwa window window nwere ike idozi.
Bspwm: Njikwa windo dabere na oghere nkebi.
DWM: Onye njikwa windo dị ike maka X.
Igbe ozi: Onye njikwa windo dị fechaa na nke nwere ike ịhazi.
Ozo: Manual Mozis window manager maka X.
i3: Onye njikwa windo taịlị dị ike.
Oghere: Nchịkọta window windo X11 dị fechaa.
mmọnad: Njikwa windo X11 taịl nile edere na Haskell.
Ngwa ndị ọzọ na Ngwaọrụ maka Ubuntu / Linux
Akwụsị 2 ban: Ọ na - enye gị ohere i toomi faịlụ (eg / var / log / apache / error_log) ma machibido adreesị IP nke na - egosi ihe ndekọ log ọjọọ - ọtụtụ ndapụta paswọọdụ, na-achọ ọghọm, wdg.
Ahịa: Ọ bụ eserese eserese iji hazie grub2 / Burg na ntọala menu.
Mycroft: AI maka onye ọ bụla
Ndepụta a dị egwu dabere na Dị egwu-Ubuntu-Linux de Luong Vo Tran Thanh, onye rụrụ nnukwu ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Ndepụta ngwa ngwa na ngwa maka Ubuntu / Linux
Lee ezigbo ederede, onyinye dị mma !!, edebere m ya n'akpa maka mgbe m laruru ụlọ iji nwalee ngwa ọrụ ụfọdụ maka ubuntu m
Maka ọdịyo, ana m akwado Nuvola Player.
Zaghachi Ricardo Rafael Rodriguez Reali
Ndepụta ahụ dị mma ma m ga-agụ ya na zuru ezu.
Ihe dị n'ime m na-agwa m na foto ndị ahụ na-efu, mana o kwesịghị inye m nsogbu, mana ọ ka na-eme.
ọmarịcha ọdụ ụgbọ mmiri enyi ekele
Zaghachi nye gergger
Enweghị m ike ịchọta ụzọ iji wụnye bọlbụ gz
Zaghachi helena llanos palomo
Ọmarịcha na ọtụtụ ngwaọrụ na-ewe oge iji, ekele na ekele nye ndị njikwa gị. ọmarịcha ọrụ !!
Plasma 5.4 Beta esila n’itekwu oku
Ihe 10 onye mmeghe mepere emepe kwesiri ime